Izindaba - Ibhondi Yobungani, Ibhuloho Lokuhweba
Ngaphansi kwesimo esibi segciwane lomqhele elisha lomhlaba, i-129th Canton Fair yaqala ngokusemthethweni emafini ngo-9 ekuseni ngo-Ephreli 15, 2021. ICanton Fair yamanje izobanjwa kusukela ngo-Ephreli 15 kuya ku-24, umbukiso uzohlala kwabali-10 izinsuku. Ngokungafani nemibukiso engaxhunyiwe ku-inthanethi ngaphambi kuka-2020, i-Canton Fair yalo nyaka yi-Cloud Canton Fair, futhi amakhasimende avela kuwo wonke amazwe nezifunda angaxhumana nabaphakeli ngeplatifomu yamafu. Amakhasimende ngeke adinwe ukuhamba noma ukuhambela umbukiso ngezinyawo, kepha asengafunda ngemikhiqizo abanentshisekelo kuyo ngeziteshi nezindlela ezahlukahlukene ezinjengokusakaza bukhoma komthengisi, ividiyo, ukuxhumana kwabathengisi online, nomyalezo.
ICloud Canton Fair ayigcini nje ngokuqinisekisa ukubanjwa okushelelayo kombukiso wokuhweba, kepha futhi igwema ukuhlangana kwezixuku, igwema ukutheleleka kwe-coronavirus entsha, futhi ivikela impilo nokuphepha kwabo bonke ababonisi kanye nomphakathi.
Inani eliphelele lamadokodo eCanton Fair yalo nyaka lilinganiselwa ku-60,000. Kulindeleke ukuthi kube nezinkampani ezibalelwa ku-25 000 zangaphakathi nezangaphandle. Kunezindawo ezingama-50 sezizonke, ezihlukaniswe ngezigaba eziyi-16 zezinto ezifana ne-elekthronikhi, imishini, izinto zokwakha, izimpahla zabathengi, ukuthuthukiswa kwekhaya, izindwangu, okokugqoka nezingadi.
I-Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd. iphinde yahlanganyela kulo mbukiso. Imikhiqizo eyethulwe yimikhiqizo yokunisela, kufaka phakathi amateyipu wokunisela wokudonsa, amashubhu wokunisela ngenkasa, amateyipu ama-micro-Sprinkler, ama-sprinkler, izesekeli zeteyiphu zokunisela, njll.
Ngalo mbukiso, sisungule ukuxhumana namakhasimende amaningi aphesheya. Sineqembu le-R & D elisebenza kahle kanye nethimba lokuklama nethimba lesevisi yokukhangisa. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi esikhathini esizayo esiseduze, sizofinyelela ebudlelwaneni bokusebenzisana namakhasimende amaningi. Silindele ukujoyina kwakho!
Isikhathi Iposi: Apr-15-2021